Semalt: Ahoana ny Wikipedia manentana ny fianarana amin'ny fianarana
Wikipedia dia heverina ho loharanom-baovao manan-danja indrindra ao amin'ny Internet. Taloha, ny mpampianatra sy ny manam-pahaizana dia nahafantatra ny Wikipedia ho toy ny tranonkala iray izay niparitaka ny vaovao diso sy ny tsaho. Amin'ny vanim-potoana, niova ny hevitra, mandinika ireo fitsipika sy fitsipika napetraka izay manara-maso ny fampahalalana rehetra alohan'ny amporisihina azy ao amin'ny Wikipedia.
Ankoatra izay, ny fanazavana tsy marina sy mamitaka dia haingana amina fanontana manonta izay manolo-tena ary manolo-tena hanao Wiki ho toerana tsara ho an'ny mpianatra. Ny ankamaroan'ny olona dia mitsidika ny Wikipedia mitady ny fanazavana ny lohahevitra mampiady hevitra.
Milaza i Julia Vashneva, Semalt Mpitarika Success Success Manager, fa ny governemanta dia tarihin'ny fitsipika, politika ary ny fenitra marim-pototra. Ny vondrom-piarahamonina Wikipedia dia tsy mankasitraka ny famoahana lahatsoratra nefa tsy voatery midika hoe loharano. Wiki dia manentana ireo mpianatra, mpampianatra ary ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fanabeazana manontolo mba hamoronana votoaty vaovao ary tafiditra ao amin'ny Wikipedia, mitadidy fa ny asany dia mampahafantatra ny olon-tsotra mikaroka lahatsoratra mendrika.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Wikipedia dia nanampy ireo mpampianatra mba hamorona profesional Course Wiki, ka hanamora ny fampiharana azo ampiharina amin'ny lohahevitra nianatra tao am-pianarana..Amin'izao fotoana izao dia misy tetikasa fianarana ambony mihoatra ny 120 ao amin'ny Wikipedia. Jon Beasley, profesora ao amin'ny Oniversite an'i Columbia, no manam-pahaizana voalohany nanentana ny mpianatra hanangana lahatsoratra ho an'ny Wikipedia, izay mifantoka indrindra amin'ny literatiora.
Mba hihaona ireo fenitra sy politika rehetra ao amin'ny Wikipedia, ny mpampianatra Beasley dia nampianatra ny mpianany hifandray amin'ny ekipa mpanohana ny Wikipedia alohan'ny handefasana votoaty, mba handraisana toro-lalana hafa. Ity tranga ity dia nanome fahatakarana lalindalina ny mpianatra mikasika ny fomba fiasan'ny Wikipedia sy ny format ilaina amin'ny famoronana lahatsoratra entina amin'ny Wikipedia.
Ny famoronana lahatsoratra izay havoaka ao amin'ny Wikipedia dia tsy mora. Ny format fianarana Wiki sy fampianarana dia tena manan-danja indrindra mba hisorohana ny famafana ny lahatsoratrao. Ny fanitsiana sy ny fijerena horonantsary avo roa heny noho ny avo roa heny dia manohana ireo tonian'ny fanoloran-tena. Ny fametrahana votoaty bebe kokoa amin'ny fisoratana efa misy dia heverina ho asa mora ho an'ny mpianatra raha ampitahaina amin'ny famoronana votoaty vaovao. Izany dia manampy ireo mpianatra hianatra momba ny fahaiza-mamolavola sy manana traikefa bebe kokoa amin'ny lahatsoratry ny korontana. Manoro hevitra ny mpianatra ny tetikasa mpampianatra mba hiasa amin'ny tarika hahazoana valiny marina.
Ny Wikiversity dia sehatra iray izay nandray anjara voalohany tamin'ny fandrosoan'ny mpianatra ho an'ny fianarana ambony. Ny Wikiversity dia ahafahan'ny mpianatra mampiditra ny votoaty izay ampahafantarina amin'ny mpianatra hafa mba hiditra sy hianatra. Ny mpampianatra dia tompon'antoka amin'ny famoronana Wiki, famerenana fitarihana fianarana, drafitr'asan'ny lesona, ary fampahalalana fanampiny ilaina takian'ny mpianatra rehefa mamorona ny tetikasany.
Ny Cour Wiki dia manome ny mpianatra ny fampahalalana ilaina momba ny dingana manokana mialoha. Amin'ny farany, ny mpianatra dia mahazo fotoana ampy hanapahan-kevitra raha handray fepetra manokana na tsia. Ny pejy Wikiversity dia manome mpianatra ny toerana iray ahafahan'izy ireo manampy haingana sy manitsy ny votoatiny. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo mpianatra dia mampiasa pejy Wikiversity mba handefa ny tetikasa nianatra nandritra ny fivoriana, nanampy loharanom-baovao, ary nanoro-hevitra ny fitaovana ilaina Source .